ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းတွင် striatum ၏ပါဝင်မှု (၂၀၁၆) - သင်၏ ဦး နှောက်ပေါ် Porn
ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်း (2016) အတွက် striatum များ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှု
ဆွေးနွေးမှုများကို Clin neuroscience ။ 2016 မတ်လ; 18 (1): 55-63 ။
ဂျူလီ Goulet-Kennedy, စင်တာ interdisciplinaire က de recherche en readaptation နှင့် enegration လူမှုရေး။ Québec၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစင်တာ၊ Faculté de médisecine, Université Laval, Québec, Canada;
Sara Labbe, M.Sc
Sara Labbe, ပြန်လည်နေရာချထားရေးနှင့်လူမှုရေးစင်တာ interdisciplinaire de recherche ။ Québec၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစင်တာ၊ Faculté de médisecine, Université Laval, Québec, Canada;
ဒေါ်ရှယ်လီ Fecteau, Ph.D*
ဒေါ်ရှယ်လီ Fecteau, စင်တာ interdisciplinaire က de recherche en readaptation et en လူမှုရေး။ Québec၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစင်တာ၊ Faculté de médisecine, Université Laval, Québec, Canada;
ဆုံးဖြတ်ချက်ချကျယ်ကျယ်ဘောဂဗေဒ၏ဆက်စပ်နှင့်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရှုထောင့်ကနေလေ့လာခဲ့ခဲ့ပြီး, ဒါပေမယ့်နေဆဲအနည်းငယ်သာတစ်ဦးချင်းစီဆုံးဖြတ်ချက်ချအပေါ်လူသိများသည်။ ဤတွင်ကျနော်တို့ကဆုံးဖြတ်ချက်ချတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ကွဲပြားခြားနားသိမြင်မှုဖြစ်စဉ်များနှင့်၎င်း၏ဆက်စပ်အာရုံကြောအလွှာဆွေးနွေးပါ။ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်းအတွက် putative ကာကွယ်သည့် prefrontal cortex နှင့် striatum ဖြစ်ပေါ်လာပါသည်။ အမျိုးမျိုးသောလက်တွေ့လူဦးရေအတွက်ချို့ယွင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချကျွမ်းကျင်မှုဟာ prefrontal cortex နဲ့ striatum အတွက်လှုပ်ရှားမှုနဲ့ဆက်စပ်ပါပြီ။ ကျနော်တို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချကျွမ်းကျင်မှုကျွန်တော်တို့ရဲ့နားလည်မှုရှေ့ဆက်နိုင်ရန်အတွက်သိမြင်မှုနှင့်အာရုံကြောနှစ်ခုလုံးကိုအလွှာ၏ပေါင်းစည်းမှု၏ဒီဂရီခိုင်ခံ့စေ၏အရေးပါမှုကိုမီးမောင်းထိုးပြ။ သိမြင်မှု Paradigm ၏စည်းကမ်းချက်များ၌, အမျိုးမျိုးသောအခင်းအကျင်းနှင့်ဆုလာဘ်နှင့်အတူဆုံးဖြတ်ချက်ချအကဲဖြတ်ရန်ကြောင်းစမ်းသပ်တာဝန်များကိုများ၏ဂေဟစနစ်တန်ဖိုးကိုတိုးတက်လာဖို့လိုအပ်သည်ရှိ၏, ဒီကို real-ဘဝအကြိုးကြေးဇူးမြားသို့ဓာတ်ခွဲခန်းသင်ယူဘာသာပြန်ဆိုကိုကူညီလိမ့်မယ်။ အာရုံကြောအလွှာ၏စည်းကမ်းချက်များ၌, neuroimaging နည်းစနစ်များအသုံးပြုခြင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချနှင့်အတူဆက်စပ်အာရုံကြောကွန်ရက်များရဲ့အနှစ်သာရကကူညီပေးသည်; ပိုပြီးမကြာသေးမီက, noninvasive ဦးနှောက်ဆွနှင့်အတူ, ထိုကဲ့သို့သော prefrontal cortex နဲ့ချိတ်ဆက်ဒေသများ (ဥပမာ striatum) ၌ရှိသကဲ့သို့, ဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှု modulate ဖို့နည်းလမ်းတွေလည်းအာရုံကြောနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်း၏သိမြင်မှုအလွှာအပေါ်အလင်းကိုသွန်းပါပြီ။ အတူတကွဤသိမြင်မှုနှင့်အာရုံကြောချဉ်းကပ်မှုချို့ယွင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အတူလူနာတွေအတွက်အသုံးဝင်ပါလိမ့်မယ်။ အလုပ်၏ဤလိုင်းနောက်ကွယ်မှ drive ကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချစွမ်းရည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝများတွင်ကျန်းမာ, ကျန်းမာရေး, လုံခြုံရေး, နှင့်ဘဏ္ဍာရေးနှင့်လူမှုရေးရွေးချယ်မှု၏အရေးကြီးသောကဏ္ဍများအခြေခံကြောင့်ဖြစ်သည်။
keywords: ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း, ထကြွလွယ်သော, ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်း, prefrontal cortex, ဆုလာဘ်ရှာ, အန္တရာယ်ဆည်းပူးနေ, schizophrenia, striatum, ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းရောဂါ
ကျနော်တို့စဉ်ဆက်မပြတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်များရင်ဆိုင်ရ: "? ဘယ်နံနက်စာသီးနှံ" "ငါလေ့ကျင့်ခန်းသငျ့သလော ဟုတ်ကဲ့, ဒါပေမယ့်အရာလေ့ကျင့်ခန်း? ဘောလုံးသို့မဟုတ်ယောဂ? "" ကျွန်မနေတဲ့အားလပ်ရက်ယူသငျ့သလော ဒီတစ်ခါလည်းဒီထောက်ပံ့ငွေနောက်ဆုံးနေ့အပြီး။ "" ငါကဆင်းငြိမ်သက်ဖို့ဝီစကီနောက်ထပ်ဖန်ခွက်ကိုမသောက်သင့်သလော ငါ့ကိုနှိုးဖို့ကော်ဖီနောက်တစ်ခွက်? "ဆုံးဖြတ်ချက်များကိုပြင်ပ (ဥပမာအရွယ်အစားနှင့်အလားအလာဆုလာဘ် / ဆုံးရှုံးမှုများနှောင့်နှေး) နှင့်ပြည်တွင်းရေးအချက်များ (ဥပမာရောင်ပြန်-controlled နဲ့ reflex-အလိုအလျောက်အပြုအမူအားဖြင့်မောင်းနှင်နေကြသည်1), အဖြစ်မျိုးရိုးဗီဇလွှမ်းမိုးမှု (ဥပမာ prefrontal dopamine စနစ်များ2) သို့မဟုတ် psychopathology ။
တစ် ဦး ချင်းစီတွင်ဆုံးဖြတ်ချက်ညံ့ဖျင်းခြင်းသည်ရွေးချယ်မှုများကိုမတော်လျော်စွာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုသို့မဟုတ်အလွန်အမင်းစွန့်စားသော (သို့မဟုတ်အလွန်အမင်းသတိထားချဉ်းကပ်မှု) ချဉ်းကပ်မှုကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ ကျန်းမာရေး၊ ဘေးကင်းရေးနှင့်ဘဏ္financialာရေးချမ်းသာအတွက်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်။ နဂိုအတိုင်းသို့မဟုတ်ချို့ယွင်းချက်ရှိသောဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းစွမ်းရည်ကိုပိုမိုနားလည်ရန်မှာအရေးကြီးသည်။ ၎င်းကိုဆေးလိပ်သောက်ခြင်းဥပမာဖြင့်ပြနိုင်သည်။ လူတစ် ဦး သည်စီးကရက်ကိုတစ်ခါမျှဆေးလိပ်မသောက်ရသည့်အပြင်အခြားတစ် ဦး ကတစ် ဦး၊ နှစ် ဦး ကိုဆေးလိပ်ဖြတ်ပြီးနောက်ရပ်လိုက်သည်၊ သို့မဟုတ်အခြားတစ် ဦး သည်အချိန်အတန်ကြာဆေးလိပ်သောက်ပြီးနောက်ရပ်တန့်ခဲ့ပြီးနောက်တစ်ခုကဆေးလိပ်ကိုဆက်လက်သောက်သုံးပြီးနောက် ဦး နှောက်၏အကျိုးဆက်များကိုခံစားနေရသောအခြားသူတစ် ဦး အကြောင်းနားလည်ခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုစဉ်းစားပါ။ ပလပ်စတစ်အပြောင်းအလဲများနောက်ပိုင်းတွင်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန်များ၏ပျက်စီးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူသို့ဖြစ်ပေါ်သောအရာကိုအခြေခံ။ ၎င်းသည်ဥပမာတစ်ခုမျှသာဖြစ်သော်လည်းအမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှု (ဥပမာ - ရောဂါဗေဒလောင်းကစားခြင်း) အတွက်အလားတူယုတ္တိဗေဒကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ လူတစ် ဦး အနေဖြင့်လောင်းကစားတွင်သူ / သူမ၏လူမှုဖူလုံရေးကိုမထိခိုက်မချင်းစွန့်စားရသည့်အကြောင်းရင်းဖြစ်သည်။ အခြားဥပမာတစ်ခုမှာစိတ်ကျဝေဒနာရှိသူသို့မဟုတ်လေဖြတ်ခြင်းခံရသောလူတစ် ဦး သည်အကြံပြုထားသောလူနေမှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကြံဥာဏ်များ (ဥပမာ - လေ့ကျင့်ခန်းများ၊ အရက်သုံးစွဲမှုကိုလျော့နည်းစေသည်၊ ကျန်းမာစွာစားသုံးခြင်း၊ လူမှုရေးလှုပ်ရှားမှုများတွင်ပါ ၀ င်ခြင်း) ကိုလိုက်နာခြင်းမရှိသောအခြားသူတစ် ဦး နှင့်နှိုင်းယှဉ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုသူ၏ကျန်းမာရေးနှင့်အသက်တာတွင်အန္တရာယ်ရှိနေသော်လည်းလိုက်နာပါ။ ထို့ကြောင့်ရေရှည်အပြုအမူနှင့်လူနေမှုပုံစံစတဲ့ပြောင်းလဲမှုများကိုလိုအပ်သည့်ကျယ်ပြန့်သောရောဂါများကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းစွမ်းရည်လိုအပ်သည်။
ဤဆောင်းပါး၏ရည်ရွယ်ချက်မှာဆုံးဖြတ်ချက်ချကျွမ်းကျင်မှုနှင့်၎င်းတို့၏ဆက်စပ်အာရုံကြောအလွှာဆွေးနွေးရန်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ကျနော်တို့ဒီလိုကျွမ်းကျင်မှုအတွက် prefrontal cortex နဲ့ striatum ရဲ့သြဇာအခန်းကဏ္ဍအလေးပေး။ ငါတို့သည်လည်းအမျိုးမျိုးသောလက်တွေ့လူဦးရေ, အထူးသဖြင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန်, အမူအကျင့်စွဲနှင့် schizophrenia အတွက်ချို့ယွင်းခံရဖို့လူသိများဖြစ်ကြောင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချမှာပါဝင်နေတဲ့သိမြင်မှုနှင့်အစိတ်ခွန်အားနိုးဖြစ်စဉ်များကိုပြန်လည်သုံးသပ်။ ကျနော်တို့နောက်ထပ်ကုထုံးမဟာဗျူဟာများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်မြှင့်တင်ရန်အလို့ငှာတွင်ဤသိမြင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်အာရုံကြောအလွှာရဲ့အနှစ်သာရကရန်လိုအပ်ကြောင်းမီးမောင်းထိုးပြ။ အမှန်စင်စစ်ချဉ်းကပ်မှုနှစ်ခုစလုံးကိုဦးနှောက်ပစ်မှတ်ထားစေခြင်းငှါ နှင့် တစ်ဦး maladaptive လမ်းကြောင်းမှ၎င်း, တစ်ဦးကျန်းမာသန်စွမ်းတဲ့လူနေမှုပုံစံဆီသို့လူနာကွာလမ်းပြအလို့ငှာအပြုအမူ။
ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်းနှင့် striatum ၏အခန်းကဏ္ဍကို၏လုပ်ငန်းစဉ်များ
ဆုံးဖြတ်ချက်ချဘောဂဗေဒနှင့်စျေးကွက်၏ဆက်စပ်နှင့်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရှုထောင့်ကနေအဓိကအားဖြင့်လေ့လာခဲ့ပြီ။3 neuroeconomics နှင့် neuromarketing ၏မကြာသေးခင်ကပေါ်ပေါက်လာလူ့ဦးနှောက်ဥပမာ, ဘဏ္ဍာရေးဆုံးဖြတ်ချက်များစေသည်ဘယ်လောက်သို့သုတေသနပြုဒေသများဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။4 ဟုတ်ပါတယ်, ကျွန်တော်လုပ်ဆုံးဖြတ်ချက်များသည်လည်းငါတို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအပေါ်သိသာထင်ရှားသောသက်ရောက်မှုရှိသည်, သူတို့စမ်းသပ်တာဝန်များကိုနှင့် neuroimaging နည်းစနစ်နှင့်အတူလေ့လာခဲ့နိုင်ပါတယ်။
ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမချထိုကဲ့သို့သောအာရုံစူးစိုက်မှု, ဆုလာဘ်ရှာ, Impulse နှင့်အန္တရာယ်ဆည်းပူးနေအဖြစ်အများအပြားသိမြင်မှုနှင့်အစိတ်ခွန်အားနိုးလုပ်ငန်းစဉ်များ, ပါဝငျသညျ။ ဤရွေ့ကားဖြစ်စဉ်များဆုံးဖြတ်ချက်မချရသောအခါအပြန်အလှန်နှစ်ခုစနစ်များ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ခြင်းအဖြစ်ရှုမြင်ခံရနိုင်သည်ချက်ချင်းဆုလာဘ်များနှင့်ချက်ချင်းနှောင့်နှေးနှစ်ဦးစလုံးဆုလာဘ်တန်ဖိုးထားသော "အေး" ဆင်ခြင်တုံတရား system ကိုတန်ဖိုးထားသော "ပူ" စိတ်ခံစားမှုသည့်စနစ်လည်းမရှိ။ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်း, အရှင် amodal အချက်ပြမှုများကိုလက်ခံရရှိခြင်းနှင့်ထုတ်လုပ်တဲ့တစ်ပြောင်းလဲနေသော multilevel အာရုံကြော circuitry အားဖြင့်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ multicomponent သိမြင်မှုနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်သည်အဖြစ်သတ်မှတ်ခံရ, နှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောကိုယ်ပိုင်နှင့်အခြားသော-တုံ့ပြန်ချက်ကိုထိန်းညှိခြင်းနှင့် reassessing နိုင်ပါတယ်။ putative ကာကွယ် (ဥပမာ refs မြင်သည်အတိုင်းဤသည် circuitry အဆိုပါ prefrontal cortex နဲ့ striatum အတူ cortical နှင့် subcortical ကွန်ရက်များအတွင်းသတင်းအချက်အလက်ပေါင်းစပ်ပြီးနှင့် synchronizes 4-5-6-7-8-9-10).
ဒီမူဘောင်အတွင်းမှာပဲဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်း characterizing နှင့်မြှင့်တင်ရန်အကောင့်ပြင်ပအကြောင်းအချက်များ (ဥပမာ, လူမှုရေးပတ်ဝန်းကျင်) သို့ယူနှစ်ဦးစလုံးသိမြင်မှုနှင့်အာရုံကြောအဆင့်ပေါင်းစည်းမှု၏ဒီဂရီကိုခိုင်ခံ့စေနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ, အပြုသဘောဆုံးဖြတ်ချက်ချမြှင့်တင်ရန်နည်းဗျူဟာကိုလေ့ကျင့်ဖို့လူနေမှုပုံစံစတဲ့အပြောင်းအလဲ (ဥပမာအဘို့မိမိတို့ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ရောက်ရှိဖို့ရန်ဆန္ဒရှိသောသူတို့အားတစ်ဦးချင်းစီအဘို့အတိုကျရိုကျ inhibitory နှင့်သိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးခိုင်ခံ့စေခြင်းဖြင့်ကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်တဲ့ကျန်းမာရွေးချယ်စရာ၏ဆုလာဘ်တန်ဖိုးများရေချိန်ပြန်လည်ညှိရန်နည်းလမ်းများဖော်ထုတ်ပါဝင်သည်; နုတ်ထွက်သို့မဟုတ်လျှော့ချရန် ဆေးလိပ်သောက်, လောင်းကစား, ဒါမှမဟုတ်အရက်သောက်; ကျန်းမာစားရန်) ဒါပေမယ့်သူကိုအကြိမ်ကြိမ်ပျက်ကွက်ခဲ့ကြသည်။11 သို့သော်စိန်ခေါ်မှုအစစ်အမှန်ဘဝအကြိုးကြေးဇူးမြားဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်သောတစ်ဦးချင်းအပေါ်အခြေခံအောင်လုပ်ဆောင်မှုနောက်ခံဆုံးဖြတ်ချက်မြှင့်တင်ရန်နိုင်ရန်အတွက်သပ္ပါယ်အပြုအမူတွေနဲ့ဦးနှောက် plasticity ကိုလမ်းပြဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုကိုဖေါ်ထုတ်ရန်ဖြစ်ပါသည်။
ဖြစ်တဲ့ adaptive အပြုအမူတွေကိုလမ်းပြအလို့ငှာခုနှစ်, အာရုံကြောကွန်ယက်ကိုကောင်းစွာဖော်ပြထားရန်လိုအပ်ပါသည်။ အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချကျွမ်းကျင်မှုရှုပ်ထွေးပြီးအာရုံကြောကွန်ယက်ကိုပါဝင်သောအများအပြားသိမြင်မှုနှင့်အစိတ်ခွန်အားနိုးဖြစ်စဉ်များပါဝငျ။ သို့သော်အချို့သော့ချက်ကစားသမား, အထူးသဖြင့် prefrontal cortex နဲ့ striatum ရှိပါတယ်။ T ကသူ prefrontal cortex နဲ့ striatum အလွန်အမင်းအပြန်အလှန်များမှာ12 နှင့်မကြာခဏစိတ်ခွန်အားနိုးဖြစ်စဉ်များစဉ်အတွင်း coactivate ။13,14 နှစ်ဦးစလုံး ventral နှင့် dorsal striatum ၏ကွဲပြားအစိတ်အပိုင်းများကျန်းမာလူကြီးများအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောဆုံးဖြတ်ချက်ချဖြစ်စဉ်များနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့ကြ.14-16 ထို့အပွငျဆုလာဘ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချအတွက်သြဇာဖြစ်ကြပြီးအထူးသဖြင့် striatum သက်ဝင်စေဖို့ပေါ်လာပါသည်။17 စိတ်ဝင်စားစရာရွေးချယ်မှုရှိခြင်းမူလကပင်ဆုချီးခံရဖို့ပုံပေါ်.18 လေ့လာရေးရွေးချယ်မှုအောင်အဖြစ်ရွေးချယ်မှုများ (ဥပမာ, ထိန်းချုပ်အမြင်) ရှိခြင်းကြိုးဖြစ်ကြောင်းနှင့် striatum အတွက်လှုပ်ရှားမှုထုတ်ယူကြောင်းပြသခဲ့ကြသည်။ ဥပမာ, striatum အတွက် သာ. ကြီးမြတ်လှုပ်ရှားမှုရွေးချယ်မှုမရှိဘဲတူညီသောဆုလာဘ်ရရှိသောသူကိုဘာသာရပ်များအတွက်ထက်အများအပြား options များကြားတွင်ရွေးချယ်ရာတွင်ထံမှဆုလာဘ်ရရှိသောသူကိုဘာသာရပ်များအတွက်ရှာတွေ့ခဲ့သည်;19 lဆုလာဘ် passivel လက်ခံရရှိသောသူတို့နှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်လျှင်ရရှိသောကယ်နှုတ်တော်မူ၏ဆုလာဘ်ကိုလက်ခံရရှိသူကိုဘာသာရပ်များအတွက် ikewisey.20,21
ဆုံးဖြတ်ချက်ချ maladaptive အပြုအမူတွေနှင့် / သို့မဟုတ် maladaptive အာရုံကြောကွန်ရက်များကြောင့်ထိခိုက်နိုင်ပါသည်။ ဆုံးဖြတ်ချက်ချ-related အပြုအမူတွေ (ဥပမာ, တစ်ဦးပထမဦးဆုံး [သို့မဟုတ် "အခြားနောက်ဆုံး"] စီးကရက်ကိုလက်ခံခြင်း) နှင့်သိမြင်မှုလုပ်ငန်းဆောင်တာ (ဥပမာ, ဆုလာဘ်ရှာ, Impulse, Self-ထိန်းချုပ်မှု, အန္တရာယ်ဆည်းပူးနေ, အာရုံစူးစိုက်မှု) ရောဂါလက္ခဏာတွေနဲ့ဆက်စပ်နိုင်ပါတယ် (ဥပမာ, တဏှာ ) အချို့သောဆေးဝါးဆိုင်ရာအခြေအနေများ (ဥပမာ, ဆေးရွက်ကြီးအသုံးပြုမှုမမှန်) ၏။ ချို့ယွင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန်, အမူအကျင့်စွဲလမ်းနှင့် schizophrenia အပါအဝင်အမျိုးမျိုးသောရောဂါများအတွက်အစီရင်ခံထားသည် (ဇယားငါ) ။
ကျန်းမာဘာသာရပ်များနှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်ပါကအပြုအမူတွေနဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန်အတွက် striatal လှုပ်ရှားမှု, အမူအကျင့်စွဲနှင့် schizophrenia ။ BART, လေဘောလုံးအင်နာလော့အန္တရာယ် Task ကို; DDT, Task ကိုဝနှောင့်နှေး; DS, dorsal striatum; IGT, အိုင်အိုဝါလောင်းကစား Task ကို; L ကို, left; ...
လေ့လာရေးထပ်တလဲလဲပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန်နှင့်အတူလူနာဆုံးဖြတ်ချက်ချကျွမ်းကျင်မှုအတွက်ကျန်းမာဘာသာရပ်များအနေဖြင့်ကွဲပြားခြားနား, ဤအမူအကျင့်ကွဲပြားခြားနားမှုအမျိုးမျိုးသောဦးနှောက်ဒေသများတွင်ပေမယ့်အထူးသဖြင့် ventral striatum အတွက်လှုပ်ရှားမှု၏ကွဲပြားခြားနားသောပုံစံများနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်ပါပြီ။ စိတ်ကြွဆေးအသုံးပြုသူများသည်အန္တရာယ်များဆုံးဖြတ်ချက်ချဖော်ပြရန်,22,23 သော prefrontal cortex နဲ့ striatum နှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။24 ဥပမာ, စိတ်ကြွဆေးအသုံးပြုသူများလေဘောလုံးအင်နာလော့အန္တရာယ် Task ကိုပိုမိုအန္တရာယ်များကို ယူ. ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုထက်လက်ျာ dorsolateral prefrontal cortex အတွက် ventral striatum နှင့်အားနည်းလှုပ်ရှားမှုအတွင်း သာ. ကြီးမြတ်လှုပ်ရှားမှုပြသ.23 ပိုက်ဆံဆုလာဘ်များမျှော်လင့်လည်းကင်းအသုံးပြုမှုမမှန်နှင့်အတူလူနာအတွက် ventral striatum အတွက်လှုပ်ရှားမှုရူးနှမ်း25 နှင့်မိုးသည်းထန်စွာဆေးခြောက်သုံးစွဲသူများသည်အတွက်26 ဆေးရွက်ကြီးအသုံးပြုမှုမမှန်နှင့်အတူလူနာကိုလည်း Impulse နှင့်အန္တရာယ်များဆုံးဖြတ်ချက်ချပြသပါ။27,28 အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းဆုလာဘ် striatal လှုပ်ရှားမှုအတွင်းသြဇာဖြစ်ဟန်, ဤသည်လည်းပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန်နှင့်အတူလူနာအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိထားသည်။29-35 ဥပမာ, ငွေကြေးဆုလာဘ်တုံ့ပြန် striatal လှုပ်ရှားမှုဆေးလိပ်သောက်၏မျှော်လင့်အတူဆေးလိပ်သောက်အတွက်လျော့နည်းသွားသည်။32 မကြာသေးမီက Wilson ကများနှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကဆုံးရှုံးနီကိုတင်းဆေးလိပ်သောက်သူများအတွက် striatum မှဆုလာဘ်နှင့်၎င်း၏လင့်ခ်၏တစ်ဦးချင်းစီအမြင်လေ့လာခဲ့သည်။33 သူတို့ကငွေကြေးဆုလာဘ်စဉ်အတွင်း ventral striatum ၌ သာ. ဆင်းရဲလှုပ်ရှားမှုပြသသူကိုဆေးလိပ်သောက်ငွေကြေးအားဖြည့်ဘို့ဆေးလိပ်မှရှောင်ကြဉ်ရန်လျော့နည်းစိတ်အားထက်သန်ခဲ့လေ့လာသည်။ အလားတူပဲအရက်အသုံးပြုမှုမမှန်နှင့်အတူလူနာအန္တရာယ်များဆုံးဖြတ်ချက်ချပြ36 အရာ striatal လှုပ်ရှားမှုပါဝင်ပတ်သက်နေပုံရသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, အရက်သေစာအသုံးပြုမှုမမှန်နှင့်အတူလူနာပိုပြီးထကြွလွယ်သောခဲ့ကြသည်34 နှင့်ငွေကြေးဆိုင်ရာဆုလာဘ်များမျှော်လင့်နေစဉ်အတွင်း ventral striatum အတွက်အားနည်းလှုပ်ရှားမှုပြသ။34,35 အရက်နှင့်ထိတွေ့သည့်အခါအလားတူတွေ့ရှိချက်ကျန်းမာဘာသာရပ်များအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ Gilman နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များကျန်းမာလူမှုရေးသောက်အစားပိုမိုလုံခြုံရွေးချယ်မှုထက်အန္တရာယ်များရွေးချယ်မှုလုပ်သည့်အခါအရက်ပြုတ်ရည်ဟာ striatum အတွက်လှုပ်ရှားမှုရူးနှမ်းကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။37 စိတ်ဝင်စားစရာကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုထက်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန်နှင့်အတူလူနာအတွက် သာ. ကြီးမြတ် Impulse သတင်းပို့လေးပါးလေ့လာမှုများ ventral striatum အတွက်လျှော့လှုပ်ရှားမှုပြ 29,31,34,35 အုပ်စုများအကြား Impulse မကွာခြားချက်စောင့်ကြည့်နှစ်ခုလေ့လာမှုများ ventral striatum အတွက်တိုးချဲ့လှုပ်ရှားမှုညွှန်ပြသော်လည်း25,26 (ဇယားငါ) ။
အန္တရာယ်များဆုံးဖြတ်ချက်ချ striatal လှုပ်ရှားမှုကပါဝင်ပတ်သက်သည့်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းတစ်ဝိသေသအပြုအမူ phenotype, စဉ်းစားသည်။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းနှင့်အတူလူနာအတွက် striatum အတွက်ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းနှင့်ဆက်စပ်လှုပ်ရှားမှုပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန်နှင့်အတူလူနာအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိကြောင်းဆင်တူပေါ်လာပါသည်။38 ဥပမာ, ဆုလာဘ်မျှော်လင့်နေစဉ်အတွင်း ventral striatum အတွက်လှုပ်ရှားမှုပြောင်းပြန်အရက်အသုံးပြုမှုမမှန်နှင့်အတူလူနာအဖြစ်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းနှင့်အတူလူနာအတွက် Impulse အဆင့်ဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့သည်။ 34,39,40 နှစ်ဦးစလုံး diagnoses လက္ခဏာတွေ share အဖြစ်ဒီအံ့သြစရာဖြစ်မပြုစေခြင်းငှါဤလူနာအနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များ, သည်းခံစိတ်နှင့်ဆုတ်ခွာရှိနေသော်လည်း maladaptive ဆုလာဘ်ဖြစ်စေသောအပြုအမူအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ဆက်လက်။41
ဒေတာတချို့ဟာအိုင်အိုဝါလောင်းကစား Task ကိုနှင့်အတူအကဲဖြတ်အဖြစ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချအတွက် schizophrenia display ကိုလိုငွေပြမှုနဲ့လူနာအကြံပြုအပ်ပါသည်။42 သူတို့ကလည်းနှောင့်နှေးဝတာဝန်အတွက်ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုထက်ပိုမိုထကြွလွယ်သောဖြစ်ဟန်43 နှင့်ပုတီး Task ကိုအတွက်အလျင်စလိုဆုံးဖြတ်ချက်ချ။44,45 ထို့အပွငျက schizophrenia နှင့်အတူလူနာအတွက်အလျင်စလိုဆုံးဖြတ်ချက်များနောက်ဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်ချစဉ်အတွင်းညာဘက် ventral striatum အတွက်လျှော့လှုပ်ရှားမှုနဲ့ဆက်စပ်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်46 ပထမဦးစွာဒီဂရီဆွေမျိုးသားချင်းများသည်လည်းပုံမှန်မဟုတ်သောအလျင်စလိုဆုံးဖြတ်ချက်များပြသရန်,47 သော်လည်းတစ်ဦးမှာ-အန္တရာယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြည်နယ်နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီပုံမှန်မဟုတ်သောအလျင်စလိုဆုံးဖြတ်ချက်များပြသရန်မထင်ကြဘူး, ဒါပေမယ့်ကျန်းမာဘာသာရပ်များနှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်ပါကနောက်ဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်တွေမချတဲ့အခါမှာသူတို့လက်ျာ ventral striatum အတွက်လျှော့လှုပ်ရှားမှုပြသကြပါ။48
အခြားအလက်တွေ့လူဦးရေနယ်စပ်ဒေသကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးမမှန်ရှိသူများအပါအဝင်အန္တရာယ်များဆုံးဖြတ်ချက်ချဖော်ပြရန်,49-51 compulsive သိုလှောင်,52 နှင့် prefrontal cortex အတွက်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်ရရှိခဲ့သည်။53-57 အန္တရာယ်များဆုံးဖြတ်ချက်ချနှင့်အတူဆက်စပ် striatum ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုသည်ဤလူဦးရေအတွက်ကိုလေ့လာရသေးပါဘူး။ ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်မမှန်နှင့်အတူပါကင်ရောဂါနှင့်အတူလူနာကိုလည်းအန္တရာယ်များဆုံးဖြတ်ချက်ချပြသပါ။58 ဥပမာအားဖြင့်ဤလူနာလေဘောလုံးအင်နာလော့အန္တရာယ် Task ကိုပိုမိုအန္တရာယ်များကို ယူ. , ဒီချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်ပုံမမှန်ခြင်းမရှိဘဲပါကင်ရောဂါလူနာထက် ventral striatum အတွက်အနိမ့်လှုပ်ရှားမှုနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။59
တချို့ကလူဦးရေကိုအဓိကစိတ်ကျရောဂါနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအပါအဝင်သညျ့သတိထားဆုံးဖြတ်ချက်ချ, ပြ60-62 ယေဘူယျစိုးရိမ်စိတ်ပုံမမှန်,63 နှင့်မြင့်မားသောရိုစိုးရိမ်စိတ်နှင့်အတူကျန်းမာတစ်ဦးချင်းစီ။64 စိတ်ထိခိုက်ဦးနှောက်ဒဏ်ရာနှင့်အတူလူနာကိုလည်းလေဘောလုံးအင်နာလော့အန္တရာယ် Task ကိုအတွက်ဥပမာ, ပြထားတဲ့အတိုင်းယူပြီးသညျ့သတိအန္တရာယ်ဖော်ပြရန်ပုံရသည်။65 တနည်းကား, နောက်ထပ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပိုကောင်းသောဤလူဦးရေအတွက်ချို့ယွင်းခြင်းနှင့်နဂိုအတိုင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချကျွမ်းကျင်မှုနှင့်၎င်း၏ဆက်စပ်အာရုံကြောအလွှာကိုဖော်ပြရန်လိုအပ်နေပါသည်။
ညံ့ဖျင်းသောဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းစွမ်းရည်သည်အချို့သောရောဂါများကိုဖြစ်စေသည့်အကြောင်းရင်းသို့မဟုတ်အကျိုးဆက်ဟုတ်မဟုတ်မည်သို့ပင်ဖြစ်ပါစေလူတစ် ဦး ချင်းစီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း (ဥပမာ - ဆေးလိပ်ဖြတ်ရန်) သည်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ၊ လူမှုရေးနှင့်စီးပွားရေးအပေါ်များစွာအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်။
အနာဂတ်အလုပျအတှကျတစ်ခုအန္တိမရည်မှန်းချက်, သွင်ပြင်လက္ခဏာများမြှင့်တင်ရန်နှင့်နောက်ဆုံးတွင်လူနာများ၏ကျန်းမာရေးနှင့်လူမှုဖူလုံရေးတိုးတက်စေရန်အလို့ငှာတစ်ဦးချင်းအပေါ်အခြေခံဆုံးဖြတ်ချက်ချ၏ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာလမ်းကြောင်းဖြေရှင်းပေးရန်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ တစ်ခုမှာစိန်ခေါ်မှုဆုံးဖြတ်ချက်ချဆေးဝါး, လူ့သိပ္ပံ, neuroscience, ဘောဂဗေဒ, နှင့်စျေးကွက်၏လမ်းဆုံမှာသည်အတိုင်း, အမျိုးမျိုးသောစည်းကမ်းများကိုပေါင်းစပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်အချို့အပြုအမူတွေ (ဥပမာစီးကရက်၏ကမ်းလှမ်းမှုအားငြင်းပယ်ရန်) မြှင့်တင်ရန်နိုင်ဖို့အတွက်ကျနော်တို့ (ဆုလာဘ် [ဆေးရွက်ကြီး] ရှာကြံလျှော့ချဖို့, ဥပမာ) သိမြင်မှုလုပ်ဆောင်ချက်များကိုတိုးတက်အောင်၏နည်းလမ်းတွေလိုအပ်ပါတယ်နှင့် / သို့မဟုတ်ဆက်စပ်အာရုံကြောအလွှာဟာပြောင်းလဲပစ် (အထူးသဖြင့် prefrontal cortex နှင့် striatum) ။ ဤပြောင်းလဲမှုများနောက်ဆုံးမှာ (ဆေးလိပ်သောက်လျှော့ချသို့မဟုတ်ဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့ဥပမာ) လက်တွေ့အကျိုးခံစားခွင့်သို့ဘာသာပြန်ထားသောနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်ကျနော်တို့ကတခြားဒေသများနှင့်ကွန်ရက်များအတွက် prefrontal နှင့် striatal လှုပ်ရှားမှု modulate လိမ့်မည်ဟုပိုကောင်းသိမြင် Paradigm နှင့်ချဉ်းကပ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
တစ်ခုမှာအရေးပါသောအစစ်အမှန်ကမ္ဘာအခြေအနေများမှဆုံးဖြတ်ချက်ချ၏ဓာတ်ခွဲခန်း-based အသိပညာလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ အမှန်စင်စစ်စမ်းသပ်ချက်ကို real-ဘဝအကြိုးကြေးဇူးမြားသို့အခြေခံတွေ့ရှိချက်ဘာသာပြန်ဆိုအစစ်အမှန်ဘဝအခြေအနေများသို့ထိန်းချုပ်ထားသောဓာတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်ချက်ကျော်လွန်သွားပါသင့်တယ်။ (ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်းတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ဖြစ်စဉ်များ) တစ်ဦးကအလွန်အရေးပါသော်လည်း, မကြာခဏဒါပေါ်မှာစိတ်ခံစားမှုမှလူ့ဦးနှောက်ကိုတုံ့ပြန်မှုကိုတိုင်းတာသောအခါ, အသှငျအပွငျလစျြလြူရှု, Impulse, အလိုရှိသဖြင့်, ဂေဟစနစ်တရားဝင်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောစီးကရက်တစ်ဦးကမ်းလှမ်းမှုကိုလက်ခံသို့မဟုတ်ငြင်းပယ်၌ရှိသကဲ့သို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချ, ဖြစ်ကောင်းကဓာတ်ခွဲခန်း setting တွင်မထက်ကို real-အသက်တာ၌ကွဲပြားခြားနားလုပ်ကိုင်လျက်ရှိကြောင်းသိရသည်။ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်းများအတွက်ကောင်းစွာ-ထူထောင် Paradigm ရှိပါတယ်66,67 ကြောင်းအမျိုးမျိုးသောအစစ်အမှန်ကမ္ဘာဆုလာဘ်ထည့်သွင်းရန်အဆင်ပြေအောင်နိုင်ပါသည်။ ဥပမာ, Takahashi68 ဆေးရွက်ကြီးအသုံးပြုမှုမမှန်ခြင်းနှင့်ကျန်းမာတစ်ဦးချင်းစီနှင့်အတူလူနာမှငွေကြေးနှင့်စီးကရက်ဆုလာဘ်ကိုပူဇော်သက္ကာဘို့, အကိုနောက်ဆုံးရာဇသံပေးဂိမ်းနဲ့အတူ Self-အကျိုးစီးပွား Impulses သတင်းပို့လေ့လာခဲ့သည်။ (ကျန်းကျန်းမာမာတစ်ဦးချင်းစီကိုပြုသကဲ့သို့) ဆေးရွက်ကြီးအသုံးပြုမှုမမှန်နှင့်အတူလူနာပိုက်ဆံအများစုမမျှတကမ်းလှမ်းမှုပယ်ချခဲ့ပေမယ့်သူတို့ကစီးကရက်၏မတရားကမ်းလှမ်းမှုလက်ခံခဲ့သည်။ Paradigm လည်းပတ်ဝန်းကျင်ကနေအလားအလာသြဇာလွှမ်းမိုးမှုများနှင့်လူမှုကွန်ယက် (ဆေးလိပ်သောက်ဖို့ဥပမာရွယ်တူချင်းဖိအား) တို့ပါဝင်သည်သငျ့သညျ။ စွဲငြိဖွယ်ရာ virtual reality ၏ထွန်းသစ်စလယ်ပြင်ဖြစ်ကောင်းပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန်ရှိသူများအပါအဝင်အမျိုးမျိုးသောလက်တွေ့လူဦးရေအတွက်အပြုအမူတွေနဲ့သိမြင်မှုလုပ်ငန်းဆောင်တာများပိုကောင်းတဲ့စရိုက်လက္ခဏာတွေအထောက်အကူပြုပါလိမ့်မယ်,69,70 အမူအကျင့်စွဲ,71 နှင့် schizophrenia ။72 ကျနော်တို့ကို real-ဘဝအခြေအနေများကိုတုပဖို့ကြောင့်ရှုပ်ထွေး Paradigm လိုအပ်တယ်, ဒါပေမယ့်ငါတို့သည်လည်းဆုံးဖြတ်ချက်မချရသောအခါအာရုံကိုဖြစ်စဉ်များကနေလှုံ့ဆျောမှု, အကဲဖြတ်, ရွေးချယ်ရေးနှင့်မျှော်လင့်ခြင်း, ပါဝင်ပတ်သက်အမျိုးမျိုးသောလုပ်ငန်းစဉ်များခွဲစိတ်ခြင်းနှင့်ခွဲထုတ်လိမ့်မည်ဟု Paradigm လိုအပ်ပါတယ်။ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်းအတွက်သိမြင်မှုဖြစ်စဉ်များ၏စရိုက်လက္ခဏာတွေလက်တွေ့အကျိုးစီးပွားဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ, ဆေးလိပ်သောက်ရလဒ်များစိတ်ခွန်အားနိုးတွေကိုအားဖြင့်ဟောကိန်းထုတ်ခဲ့ကြသည်73,74 နှင့်နှောင့်နှေးဆုလာဘ်များလျှော့စျေး။75 ဒါဟာငွေကြေးဆုလာဘ်ပိုမိုလျှော့ပြသသူကိုဆေးရွက်ကြီးအသုံးပြုမှုမမှန်နှင့်အတူလူနာတစ်ဦး 28-ရက်သတ္တပတ်သိမြင်-အပြုအမူကုထုံးကာလအတွင်းဆေးလိပ်သောက် abstinence ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့လျော့နည်းဖွယ်ရှိဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။76,77
ပိုပြီးမကြာသေးမီကအပြုအမူနည်းလမ်းများ (ဥပမာ neurofeedback) နှင့်, noninvasive ဦးနှောက်ဆွ၏နည်းစနစ်အပါအဝင်ဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှု modulate ဖို့နည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောထပ်တလဲလဲ transcranial သံလိုက်ဆွ (rTMS) နှင့် transcranial တိုက်ရိုက်-လက်ရှိဆွ (tDCS) အဖြစ် Noninvasive ဦးနှောက်ဆွ, Vivo လူ့သိမြင်လုပ်ဆောင်ချက်များကို modulate နိုင်ပါတယ်။78 rTMS အတော်လေး focal, ထပ်ခါတလဲလဲသံလိုက်စက်ကွင်းများ၏လျှောက်လွှာကိုတဆင့်ဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှု noninvasive မော်ဂျူဖွတဲ့ technique ကိုဖြစ်ပါတယ်။ tDCS ယူဆရ transmembrane ပရိုတိန်းနှင့်ဟိုက်ဒရိုဂျင်အိုင်းယွန်းအာရုံစူးစိုက်မှုအတွက်လျှပ်စစ်-related အပြောင်းအလဲများကိုမြားတှငျပွောငျးလဲကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ subthreshold အာရုံခံအမြှေးပါး depolarization ကြောင့်ဖြစ်ကြောင်းစိတ်လှုပ်ရှားဆိုင်းဖြစ်ပေါ်သည်။ rTMS နှင့် tDCS နှစ်ဦးစလုံးဆွ parameters တွေကိုပေါ် မူတည်. ဆွများ၏ကာလ outlast နိုငျသောအာရုံကြော inhibitory နှင့် / သို့မဟုတ် excitatory အပြောင်းအလဲများကိုလည်းဆောင်ကြဉ်းပေးနိုင်သည်။ အကျဉ်းခုနှစ်, noninvasive ဦးနှောက်ဆွဤနည်းစနစ်တစ်ဦးနှောက်ကွန်ယက်၏ function ကို modulate နိုင်ပါတယ်; အရှင်, ဦးနှောက် circuitry ပေါ်မှာသက်ရောက်မှုများနောက်ပိုင်းတွင်လေ့လာတွေ့ရှိအပြုအမူရလဒ်များမှအကြောင်းတရားများဖြစ်ကြသည်။ ဤရွေ့ကား noninvasive ဦးနှောက်ဆွနည်းစနစ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချတွင်ပါဝင်ပတ်သက်သိမြင်လုပ်ဆောင်ချက်များကို modulated ကြပါပြီ,79 ဆုလာဘ်ရှာအပါအဝင်80,81 အန္တရာယ်ဆည်းပူးနေ,82,83 Impulse,84,85 အဓိကနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုအပြောင်းအလဲနဲ့86 နှင့်စိတ်ခံစားမှုသတင်းအချက်အလက်။87,88 သူတို့ကလက်တွေ့လူဦးရေအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချကျွမ်းကျင်မှုမြှင့်တင်ရန်အလားအလာရှိနိုင်ပါသည်။89 တချို့ကအထောက်အထား-of concept ကိုလေ့လာမှုများထိုကဲ့သို့သောဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန်ရှိသူများအဖြစ်လူနာများအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖြစ်စဉ်များ, modulated,90-92 ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်း,93 နှင့်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောရောဂါများ obsessive ။94 ဥပမာ, Hayashi နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များ90 ဆေးရွက်ကြီးအသုံးပြုမှုမမှန်နှင့်အတူလူနာအတွက်လက်ဝဲ dorsolateral prefrontal cortex ကျော်လျှောက်ထား rTMS များ၏သက်ရောက်မှုကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ကနှောင့်နှေးဝ Task ကိုတိုင်းတာအဖြစ်ငွေကြေးဆုလာဘ်များအတွက်နှိမ်နင်းဆေးရွက်ကြီးတဏှာနှင့် Impulse တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အခြားလေ့လာမှုမှာ dorsolateral prefrontal cortex ကျော် tDCS ၏ဆိုးကျိုးများဆေးလိပ်ဖြတ်လိုသူကိုဆေးရွက်ကြီးအသုံးပြုမှုမမှန်နှင့်အတူလူနာအတွက်စမ်းသပ်ပြီးခဲ့ကြသည်။92 စီးကရက်အရေအတွက်သောက်သည်နှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖြစ်စဉ်များကိုလေ့လာခဲ့ကြသည်။ ယင်းကိုနောက်ဆုံးရာဇသံပေးဂိမ်းကို အသုံးပြု. ယူပြီး Self-အကျိုးစီးပွား Impulses သတင်းပို့ခြင်းနှင့်စွန့်စားမှုများ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ကျွမ်းကျင်မှု68 နှင့်အန္တရာယ် Task ကို,22 အသီးသီးငွေကြေးနှင့်စီးကရက်၏ဆုလာဘ်နှင့်အတူတိုင်းတာခဲ့ကြသည်။ အဓိကတွေ့ရှိချက်စီးကရက်၏နံပါတ်တစ်ကျဆင်းခြင်း tDCS ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများအထိခိုက်မခံဆုချခြင်းကိုခံရအံ့သောငှါအကြံပြုသည်ကိုနောက်ဆုံးရာဇသံပေးဂိမ်းတစ်ခုစီးကရက်ကမ်းလှမ်းမှု၏ငြင်းပယ်ခံရနှုန်းထားများအတွက်တိုးလာပေမယ့်ငွေကြေးမဟုတ်ပါဘူးကမ်းလှမ်းချက်သောက်သည်နှင့်ပါဝင်သည်။ တစ်ခုခုကိုဆုလာဘ်နှင့် ပတ်သက်. နှင့်အတူအန္တရာယ် Task ကိုမှာတွေ့ရှိခြင်းမရှိသိသာထင်ရှားသောအပြောင်းအလဲရှိခဲ့သည်။
rTMS နှင့် tDCS သုံးပြီးအများစုမှာ protocols များဟာ dorsolateral prefrontal cortex ပစ်မှတ်ထား။ သောကြောင့်ဦးနှောက်ခန္ဓာဗေဒ၏, ထို striatum တိုက်ရိုက် noninvasive ချဉ်းကပ်မှုနှင့်အတူပစ်မှတ်ထားမရနိုင်. အဆိုပါ prefrontal cortex နဲ့ striatum အလွန်အမင်းအပြန်အလှန်ဖြစ်သကဲ့သို့မည်သို့ပင်ဆို, က noninvasive ဦးနှောက်ဆွအတူ prefrontal cortex ပစ်မှတ်ထား striatal လှုပ်ရှားမှု modulate စေခြင်းငှါတွေးဆခဲ့သည်။ အမှန်မှာထို caudate နျူကလိယအတွက် dopamine လွှတ်ပေးရန်သွေးဆောင် rTMS အတူ dorsolateral prefrontal cortex ပစ်မှတ်ထား,95 အဖြစ် anterior cingulate နှင့် orbitofrontal cortex အတွက်.96 လတ်တလောလေ့လာမှုတှငျကြှနျုပျတို့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှု spectroscopy စဉ်အတွင်းကျန်းမာလူကြီးများ၏ dorsolateral prefrontal cortex ကျော် tDCS လျှောက်လွှာတင်ခဲ့တယ်။ ကျနော်တို့ဆွအတုအယောင်မှနှိုင်းယှဉ်အတွက်တက်ကြွစွာဆွဟာ prefrontal cortex အတွက် N-acetyl aspartate ခြီးမွှောကျကြောင်းတွေ့ရှိရသဖြင့်, striatum အတွက်အချိုမှုများနှင့် glutamine ။97 ဒါဟာ striatal လှုပ်ရှားမှုလက်တွေ့သက်ရောက်မှုရှိကြောင်းပြသခဲ့ပြီးအဖြစ် noninvasive ဦးနှောက်ဆွ, ချို့ယွင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချနှင့်အတူလူနာအတွက် prefrontal cortex နဲ့ striatum အတွက်လှုပ်ရှားမှုပြောင်းလဲပစ်နေဖြင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချကျွမ်းကျင်မှုအတွက်လိုငွေပြမှုကိုလျှော့ချနိုင်ပါတယ်ရှိမရှိစမ်းသပ်ဖို့စိတ်ဝင်စားဖို့ပါလိမ့်မယ်။ ဥပမာ, ventral striatum အတွက်လှုပ်ရှားမှုဆေးခြောက်သုံးစွဲခြင်းမမှန်မှုများနှင့်အတူလူနာကုသမှုရလဒ်များနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာစားသုံးမှုဟောကိန်းထုတ်,98 ကိုကင်းသုံးစွဲခြင်းမမှန်,99 နှင့် meth စိတ်ကြွဆေးသုံးစွဲခြင်းမမှန်။100 ဒါ့အပြင်အဆိုပါ ventral striatum အတွက်လှုပ်ရှားမှုငွေကြေးဆုလာဘ်များနှင့်ပြစ်ဒဏ်နှင့်အတူတစ်ကဒ်-နောက်ဆုံးတွင်ခန့်မှန်းလောင်းကစားလုပ်ငန်းတာဝန်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းနှင့်အတူလူနာအတွက်လောင်းကစားဝိုင်းပြင်းထန်မှုနှင့်အတူဆက်နွယ်နေကြောင်းသိရသည်ကာလအတွင်းရူးနှမ်း။39
အတူတကွဤနည်းဗျူဟာကျနော်တို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့အခါမှာပါဝင်သိမြင်မှုနှင့်အာရုံကြောဗိသုကာ characterizing အတွက်ကူညီသင့်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ကို real-ဘဝအခြေအနေများသို့ဓာတ်ခွဲခန်း setting များကိုထံမှအကူးအပြောင်းဖြေလျှော့နိုင်ရန်အတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ Paradigm များ၏ဂေဟစနစ်တရားဝင်မှုမြှင့်တင်ရန်နည်းလမ်းများလေ့လာစူးစမ်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်အခြားမည်သည့်သိမြင်မှုနှင့်အာရုံကြောလုပ်ဆောင်ချက်များကိုနှင့်ဝသကဲ့သို့, ဆုံးဖြတ်ချက်ချစွမ်းရည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်နှင့်နောက်ထပ်အနာဂတ်လေ့လာမှုများအတွက်အကောင့်ထဲသို့ခေါ်ဆောင်သွားရပါမည်ဖြစ်သောဘဝတစ်လျှောက်လုံးကိုပြောင်းလဲ။ ဥပမာ, dorsal striatum အတွက်လှုပ်ရှားမှုအဟောင်းတွေထဲမှာဘဲနုပျိုကျန်းမာတစ်ဦးချင်းစီအတွက်ချက်ချင်းနောက်ကျဆုလာဘ်ကာလအတွင်းရူးနှမ်းခဲ့သည်။101 ဤသည်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးနည်းလမ်းများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ကိုလည်းထပ်မံအကူအညီလိမ့်မည်နှင့်ကဲ့သို့သောရည်မှန်းချက်ကြီးမေးခွန်းများကို, ဖြေရှင်းပါလိမ့်မယ် အဘယ်ကြောင့်အချို့သောလူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းနှင့်မအခြားသူတွေအတန်အသင့်သောက်ကျန်းမာ စား. , လေ့ကျင့်ခန်းပါသလဲ
1 ။ အဒေါ့ဖ် R. အဆိုပါလူမှုရေးဦးနှောက်: လူမှုရေးအသိပညာ၏အာရုံကြောအခြေခံ။ Annu ဗြာ Psychol ။ 2009; 60: 693-716 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
2 ။ ဖရန့် MJ ။ , Doll BB ။ , OAS-Terpstra ဂျေ, Moreno အက်ဖ် Prefrontal နှင့် striatal dopaminergic ဗီဇရှာဖွေရေးနှင့်ခေါင်းပုံဖြတ်အတွက်တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှုကြိုတင်ခန့်မှန်း။ နတ် neuroscience ။ 2009;12(8):1062–1068. [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
3 ။ Tversky ဃ, Kahneman အေ Prospect သီအိုရီ: အန္တရာယ်အောက်မှာဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ Econometrica ။ 1979;47(2):263–292.
4 ။ Sanfey AG က။ လူမှုဆုံးဖြတ်ချက်ချ: ဂိမ်းသီအိုရီအများနှင့် neuroscience ကနေထိုးထွင်းသိမြင်။ သိပ္ပံ။ 2007;318(5850):598–602. [PubMed]
5 ။ Redgrave P. , Prescott တီဂျေ, Gurney K. အဆိုပါ Basal ganglia ။ ရွေးချယ်ရေးပြဿနာတစ်ခုကျောရိုးရှိသတ္တဝါဖြေရှင်းချက်? neuroscience ။ 1999;89(4):1009–1023. [PubMed]
6 ။ တစ်ဦးရောနှော-မဟာဗျူဟာဂိမ်းထဲမှာ Barraclough DJ သမား။ , Conroy ML ။ , Lee ကဃ Prefrontal cortex နဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချ။ နတ် neuroscience ။ 2004;7(4):404–410. [PubMed]
7 ။ လူယာသည် SM ။ , Laibson dl ။ , Loewenstein G. အ, Cohen ကို JD ။ သီးခြားအာရုံကြောစနစ်များကိုချက်ချင်းတန်ဖိုးထားခြင်းနှင့်ငွေကြေးဆုလာဘ်နှောင့်နှေး။ သိပ္ပံ။ 2004;306(5695):503–507. [PubMed]
8 ။ လူယာသည် SM ။ , Ericson KM ။ , Laibson dl ။ , Loewenstein G. အ, Cohen ကို JD ။ မူလတန်းဆုလာဘ်အဘို့အဝအချိန်။ J ကို neuroscience ။ 2007;27(21):5796–5804. [PubMed]
9 ။ Ernst အမ်, Paulus အမတ်။ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်း၏ Neurobiology: တစ် neurocognitive နှင့်လက်တွေ့ရှုထောင့်ကနေရွေးချယ်ပြန်လည်သုံးသပ်။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2005;58(8):597–604. [PubMed]
10 ။ Krain AL ။ , Wilson ကလေး။ , Arbuckle R. , Castellanos FX ။ , Milham အမတ်။ စွန့်စားမှုနှင့်အမရေရာဒွိဟ၏ကွဲပြားအာရုံကြောယန္တရားများ: ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့ Meta-analysis သည်။ Neuroimage ။ 2006;32(1):477–484. [PubMed]
11 ။ စတိန်း RZ ။ , Volkow ND ။ မူးယစ်ဆေးစွဲနှင့်၎င်း၏နောက်ခံ neurobiological အခြေခံ: အတိုကျရိုကျ cortex ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုအဘို့သက်သေအထောက်အထား neuroimaging ။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2002;159(10):1642–1652. [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
12 ။ Levy R. , ဒူဘွာခစျြလြူရှုမှုနှင့် prefrontal Cortex-Basal ganglia ဆားကစ်၏အလုပ်လုပ်တဲ့ခန္ဓာဗေဒ။ Cereb Cortex ။ 2006;16(7):916–928. [PubMed]
13 ။ Berridge KC ။ , Kringelbach ML ။ အပျော်အပါး၏အကျိုးသက်ရောက်စေ neuroscience: လူသားများနှင့်တိရိစ္ဆာန်များအတွက်ဆုလာဘ်။ Psychopharmacology ။ 2008;199(3):457–480. [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
14 ။ Delgado MR ။ လူ့ striatum အတွက်ဆုလာဘ်-related တုံ့ပြန်မှု။ အမ်းနယူးယော့ Acad သိပ္ပံ။ 2007; 1104: 70-88 ။ [PubMed]
15. Tricomi အီး, Balleine BW ။ , O'Doherty JP ။ လူ့အလေ့အထသင်ယူမှုအတွက် posterior dorsolateral striatum များအတွက်တိကျသောအခန်းကဏ္။ ။ EUR J ကို neuroscience ။ 2009;29(11):2225–2232. [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
16 ။ Hiebert မိုင်။ , Vo အေ, Hampshire ပြည်နယ်အေ, Owen လေး။ , Seergobin KN ။ , Macdonald PA ဆိုပြီး။ တုံ့ပြန်ချက်ကနေတဆင့်နှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်းအတွက်သင်ယူမှုလှုံ့ဆော်မှု-တုံ့ပြန် Striatum ။ Neuroimage ။ 2014; 101: 448-457 ။ [PubMed]
17 ။ Sharot တီ, De Martino ခ, Dolan RJ ။ ဘယ်လိုရွေးချယ်မှုထုတ်ဖော်ပြသခြင်းနှင့်ပုံစံမျိုးစုံ hedonic ရလဒ်ကိုမျှော်မှန်းထားသည်။ J ကို neuroscience ။ 2009;29(12):3760–3765. [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
18 ။ Leotti LA က။ , Iyengar အက်စ်အက်စ်။ , Ochsner KN ။ ထိန်းချုပ်မှုဘို့လိုအပ်ကြောင်း၏ဇစ်မြစ်နှင့်တန်ဖိုး: ရှေးခယျြဖို့မွေးဖွားခဲ့ပြီး။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း Cogn သိပ္ပံ။ 2010;14(10):457–463. [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
19 ။ Tricomi EM ။ , Delgado MR ။ , Fiez ဂျေအေ။ အရေးယူအရေးပေါ်ခြင်းဖြင့် caudate လှုပ်ရှားမှု Modulation ။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2004;41(2):281–292. [PubMed]
20 ။ Bjork JM ။ , Hommer DW ။ စက်ရုံတစ်ရုံ fMRI စုံစမ်းစစ်ဆေး: ရရှိသောရရှိသောနှင့်လတ်တလောတွင်-လက်ခံရရှိခဲ့သောဆုလာဘ်ကြိုမြင်ပြီး။ ပြုမူနေဦးနှောက် Res ။ 2007;177(1):165–170. [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
21. O'Doherty ဂျေ, Dayan P. , Schultz ဂျေ, Deichmann R. , Friston K. , Dolan RJ ။ ဆာပအေးစက်အတွက် ventral နှင့် dorsal striatum ၏ Dissociable အခန်းကဏ္။ ။ သိပ္ပံ. 2004;304(5669):452–454. [PubMed]
22 ။ ရော်ဂျာက RD, Everitt BJ, နာတာရှည်စိတ်ကြွဆေးအချိုးဖောက်ဆုံး၏ဆုံးဖြတ်ချက်ချသိမှတ်ခံစားမှုထဲမှာ Baldacchino အေ, et al Dissociable လိုငွေပြမှု, opiate ချိုးဖောက်မှုများ, prefrontal cortex မှ focal ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုနှင့်အတူလူနာနှင့်ကုန်ခမ်းပုံမှန်စေတနာ့ဝန်ထမ်း tryptophan-: ။ ။ monoaminergic ယန္တရားများအဘို့သက်သေသာဓက။ Neuropsychopharmacology ။ 1999;20(4):322–339. [PubMed]
23 ။ Kohno အမ်, Morales လေး။ , Ghahremani DG ။ , Hellemann G. အ, လန်ဒန် ED ။ အန္တရာယ်များဆုံးဖြတ်ချက်ချ, prefrontal cortex နှင့်စိတ်ကြွဆေးမှီခိုအတွက် mesocorticolimbic functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှု။ ဂျေအေအမ်အေစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2014;71(7):812–820. [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
24 ။ လန်ဒန် ED ။ ရှိမုန် SL ။ , Berman သည် SM ။ , et al Mood နှောင့်အယှက်များနှင့်မကြာသေးမီက abstinent စိတ်ကြွဆေးချိုးဖောက်ဒေသဆိုင်ရာနှောက်ဇီဝဖြစ်စဉ်မူမမှန်။ Arch ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2004;61(1):73–84. [PubMed]
25 ။ Jia Z. , Worhunsky PD ။ , ကာရိုး KM ။ , et al ကင်းမှီခိုအတွက်ကုသမှုရလဒ်ကိုအဖြစ်ဆက်စပ်ငွေကြေးမက်လုံးမှအာရုံကြောတုံ့ပြန်မှုတစ်ခုကနဦးလေ့လာမှု။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2011;70(6):553–560. [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
26 ။ Nestor L. , Hester R. , Garavan အိပ်ချ်ဆေးခြောက်သုံးစွဲသူများသည်အတွက် Non-မူးယစ်ဆေးဆုလာဘ်မျှော်လင့်နေစဉ်အတွင်း ventral striatal BOLD လှုပ်ရှားမှုတိုးမြှင့်။ Neuroimage ။ 2010;49(1):1133–1143. [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
27 ။ Mitchell က SH ။ စီးကရက်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းနှင့်ကွေအတွက် Impulse ၏ဆောင်ရွက်ချက်များ။ Psychopharmacology (Berl) ။ 1999;146(4):455–464. [PubMed]
28 ။ Lejuez CW ။ , Aklin WM ။ , ဂျုံး HA ။ , et al အဆိုပါလေဘောလုံး Analogue အန္တရာယ် Task ကို (BART) ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းနှင့်ကွေခွဲခြား။ Exp Clin Psychopharmacol ။ 2003;11(1):26–33. [PubMed]
29 ။ ပီတာဂျေ, Bromberg U. , Schneider အက်စ်, et al IMAGEN Consortium ။ ဆယ်ကျော်သက်ဆေးလိပ်သောက်အတွက်ဆုလာဘ်မျှော်လင့်နေစဉ်အတွင်းအောက်ပိုင်း ventral striatal activation ။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2011;168(5):540–549. [PubMed]
30 ။ နှင်းဆီ EJ ။ , ရော့စ်တီဂျေ။ , Salmeron BJ ။ , နီကိုတင်းဖို့ et al နာတာရှည်ထိတွေ့ခြင်းဟာ midbrain အဆိုပါ striatum အတွက်လျှော့ဆုလာဘ်-ဆက်စပ်လှုပ်ရှားမှုနဲ့ဆက်စပ်ပေမယ့်မပေးပါ။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2012;71(3):206–213. [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
31 ။ Kobiella အေ, Ripke အက်စ်, Kroemer NB ။ , et al ထူးခြားသောနှင့် intertemporal ဆုံးဖြတ်ချက်ချစဉ်အတွင်းအပြုအမူများနှင့်ဦးနှောက်ကို Activation အပေါ်နာတာရှည်နီကိုတင်းဆိုးကျိုးများ။ စှဲလမျးသူ Biol ။ 2014;19(5):918–930. [PubMed]
32 ။ Wilson က SJ ။ , Sayette MA ။ , Delgado MR ။ , Fiez ဂျေအေ။ အဆိုပါ caudate နျူကလိယအတွက်ငွေကြေးအမြတ်နှင့်အရှုံးမှတုံ့ပြန်မှုအပေါ်ဆေးလိပ်သောက်ခွင့်အလမ်း effect ။ J ကိုပုံမှန်မဟုတ်သော Psychol ။ 2008;117(2):428–434. [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
33 ။ Wilson က SJ ။ , Delgado MR ။ , McKee လုပ် SA ။ , ငွေကြေးဆိုင်ရာရလဒ်များမှ et al အားနည်း ventral striatal တုံ့ပြန်မှုစီးကရက်ဆေးလိပ်ခုခံတွန်းလှန်ရန်ဆန္ဒမရှိခြင်းကိုကြိုတင်ခန့်မှန်း။ Cogn ပြုမူနေ neuroscience အပေါ်ဘယ်လိုသက်ရောက်မှု. 2014;14(4):1196–1207. [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
34 ။ Beck အေ, Schlagenhauf အက်ဖ်, Wüstenbergတီ, et al Ventral striatal activation ဆုလာဘ်မျှော်လင့်နေစဉ်အတွင်းအရက်သမားအတွက် Impulse နှင့်ဆက်နွယ်နေပါသည်။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2009;66(8):734–742. [PubMed]
35 ။ Wrase ဂျေ, Schlagenhauf အက်ဖ်, Kienast တီ, et ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့၏အယ်လ်အလုပ်မဖြစ် detoxified အရက်သမားအတွက်အရက်တဏှာနှင့်ဆက်နွယ်နေပါသည်။ Neuroimage ။ 2007;35(2):787–794. [PubMed]
36 ။ Corte CM ။ , Sommers က MS ။ အရက်နှင့်အန္တရာယ်များအပြုအမူတွေ။ Annu ဗြာသူနာပြု Res ။ 2005; 23: 327-360 ။ [PubMed]
37 ။ Gilman JM ။ , Smith က AR ။ , Ramchandani VA သို့။ , Momenan R. , Hommer DW ။ ကျန်းမာလူမှုရေးသောက်အတွက်အန္တရာယ်များဆုံးဖြတ်ချက်ချ၏အာရုံကြောဆက်စပ်အပေါ်သွေးကြောသွင်းအရက်၏အကျိုးသက်ရောက်။ စှဲလမျးသူ Biol ။ 2012;17(2):465–478. [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
38 ။ Leeman RF ။ , Potenza MN ။ တူညီခြင်းနှင့်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန်အကြားကွဲပြားခြားနားမှု: Impulse နှင့် compulsive အပေါ်တစ်ဦးအာရုံ။ Psychopharmacology (Berl) ။ 2012;219(2):469–490. [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
39 ။ Reuter ဂျေ, Raedler တီ, နှင်းဆီအမ်, လက်ဗြဲ, Gläscherဂျေ, Büchel C. ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းအတွက် mesolimbic ဆုလာဘ်စနစ်၏လျှော့ချ activation ဆက်စပ်နေပါတယ်။ နတ် neuroscience ။ 2005;8(2):147–148. [PubMed]
40 ။ yan WS လီ YH, Xiao L. , Zhu N. , Bachara အေ, စွဲလမ်းအတွက် Sui ကို N. အလုပ်အဖွဲ့ memory နဲ့အကျိုးသက်ရောက်စေဆုံးဖြတ်ချက်ချ: ။ ။ ဘိန်းဖြူစွဲ, ရောဂါဗေဒလောင်းကစားသမားတွေကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုများအကြားတစ်ဦး neurocognitive နှိုင်းယှဉ်။ မူးယစ်ဆေးအရက်မူတည်တယ်။ 2014; 134: 194-200 ။ [PubMed]
41 ။ Wareham JD ။ , Potenza MN ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန်။ နံနက် J ကိုမူးယစ်ဆေးအရက်အလွဲသုံးမှု။ 2010;36(5):242–247. [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
42 ။ Struglia အက်ဖ်, Stratta P. , Gianfelice ဃ, Pacifico R. , Riccardi ဗြဲ, schizophrenia အတွက်ရော့စီအေဆုံးဖြတ်ချက်-အောင်ချို့ယွင်း: အပြုသဘော symptomatology နှင့်အတူဆက်ဆံရေး။ neuroscience လက်တ။ 2011;502(2):80–83. [PubMed]
43 ။ Heerey EA ၏။ , ရော်ဘင်ဆင် BM ။ , McMahon RP ။ , ရွှေ JM ။ schizophrenia အတွက်ဝနှောင့်နှေး။ Cogn Neuropsychiatry ။ 2007;12(3):213–221. [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
44 ။ Moritz အက်စ်, Woodward TS ။ လှညျ့နှင့် Non-လှညျ့ schizophrenic လူနာကောက်ဖို့ခုန်။ br J ကို Clin Psychol ။ 2005;44(pt 2):193–207. [PubMed]
45 ။ ဒဏ်ငွေ C. , Gardner အမ်, Craigie ဂျေ, ရွှေဗြဲဖွယ်ရှိနေသည်, ခုန်ကျော်သွားသကဲ့သို့ဖြစ်ရသည်သို့မဟုတ်ကောက်ချက်မှခုန်? ဘေးဥပဒ်အတွက် JTC ဘက်လိုက်မှု၏အခန်းကဏ္ဍကိုရှင်းလင်းထားသည့်။ Cogn Neuropsychiatry ။ 2007;12(1):46–77. [PubMed]
46 ။ Rausch အက်ဖ်, Mier ဃ, Eifler အက်စ်, ဖြစ်နိုင်ဖွယ်အလားအလာဆုံးဖြတ်ချက်ချ schizophrenia အတွက်စဉ်အတွင်း ventral striatum နှင့် ventral tegmental ဧရိယာ၌ et al လျှော့ချ activation ။ Schizophr Res ။ 2014;156(2-3):143–149. [PubMed]
47 ။ ဗန် Dael အက်ဖ်, Versmissen ဃ, Janssen ဗြဲ, မြင်း-Germeys ဗြဲ, ဗန် Os ဂျေ, Krabbendam အယ်လ်ဒေတာများကိုစုရုံး: စိတ္တအတွက် biased? Schizophr Bull ။ 2006;32(2):341–351. [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
48 ။ Rausch အက်ဖ်, Mier ဃ, Eifler အက်စ်တစ်ခုမှာ-အန္တရာယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြည်နယ်အတွင်းရှိလူနာအတွက်ဖြစ်နိုင်ဖွယ်အလားအလာဆုံးဖြတ်ချက်ချစဉ်အတွင်း ventral striatum အတွက် et al လျှော့ချ activation ။ J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု neuroscience ။ 2015;40(3):163–173. [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
49 ။ Haaland VO ။ , Landro Nl ။ နယ်စပ်ဒေသကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရောဂါနှင့်အတူလူနာအတွက်အိုင်အိုဝါလောင်းကစား Task ကိုနှင့်အတူတိုင်းတာအဖြစ်လုပ်ဆုံးဖြတ်ချက်။ J ကို Int Neuropsychol Soc ။ 2007;13(4):699–703. [PubMed]
50 ။ Schuermann ခ, Kathmann N. , Stiglmayr C. , Renneberg ခ, Endrass တီချို့တဲ့နယ်စပ်ဒေသကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရောဂါအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနှင့်တုံ့ပြန်ချက်အကဲဖြတ်။ Psychol Med ။ 2011;41(9):1917–1927. [PubMed]
51 ။ လောရင့် Ka ။ , Allen က JS ။ , Chanen လေး။ ဆုလာဘ်-based ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒုက္ခဆင်းရဲရန်၎င်း၏ဆက်ဆံရေးမျိုး: နယ်စပ်ဒေသကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရောဂါအတွက် Impulse ။ J ကို Pers disorders ။ 2010;24(6):785–799. [PubMed]
52 ။ Grisham JR ။ , Norberg MM ။ , Williams ဟာအေဒီ။ , Certoma SP ။ , Kadib R. အမြိုးအစားခှဲခွားနှင့် compulsive သိုလှောင်အတွက်သိမြင်မှုလိုငွေပြမှု။ Res Ther ပြုမူနေ။ 2010;48(9):866–872. [PubMed]
53 ။ Bechara အေ, Damasio AR ။ , Damasio အိပ်ချ်, Anderson က SW ။ လူ့ prefrontal cortex ပျက်စီးမှုအောက်ပါအနာဂတ်အကျိုးဆက်များမှအာရုံမခံစားနိုင်သော။ သိမှတ်ခံစားမှု။ 1994;50(1-3):7–15. [PubMed]
54 ။ Bechara အေ, Tranel ဃ, Damasio အိပ်ချ်, Damasio AR ။ prefrontal cortex ပျက်စီးမှုအောက်ပါမျှော်လင့်အနာဂတ်ရလဒ်များမှကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတုံ့ပြန်ရန်ပျက်ကွက်ခြင်း။ Cereb Cortex ။ 1996;6(2):215–225. [PubMed]
55 ။ Bechara အေ, Tranel ဃ, ventromedial prefrontal cortex ကိုတွေ့ရှိရပါသည်နှင့်အတူလူနာများ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်လိုငွေပြမှု၏ Damasio အိပ်ချ်စရိုက်လက္ခဏာတွေ။ ဦးနှောက်။ 2000;123(pt 11):2189–2202. [PubMed]
56 ။ လည်ဆံအက်ဖ်, Sahakian ခ, Clark ကအယ်လ်, အ prefrontal cortex ပျက်စီးမှုအောက်ပါ et al ဆုံးဖြတ်ချက်-အောင်ဖြစ်စဉ်များ။ ဦးနှောက်။ 2002;125(pt 3):624–639. [PubMed]
57 ။ Clark ကအယ်လ်, လည်ဆံအက်ဖ်, Antoun N. , Sahakian BJ ။ , Robbins TW ။ တိုကျရိုကျပေါ်၌ရှိသောအမြှေးပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအောက်ပါဆုံးဖြတ်ချက်ချချို့ယွင်းဖို့ကိုတွေ့ရှိရပါသည်နောက်ပိုင်းတွင်နှင့်တွေ့ရှိရပါသည် volume ၏ပံ့ပိုးမှုများကို။ Neuropsychologia ။ 2003;41(11):1474–1483. [PubMed]
ပါကင်ဆန်ရောဂါအတွက်ဆုချီးမြှင့်ခြင်းနှင့်အပြစ်ပေးခြင်းခံရသော Kobayakawa အမ်၊ Tsuruya N. ၊ Kawamura M. Sensitivity - အိုင်အိုဝါလောင်းကစားလုပ်ငန်း၏ပြုပြင်ထားသောဗားရှင်းကို အသုံးပြု၍ အပြုအမူပုံစံများကိုဆန်းစစ်ခြင်း။ ပါကင် Related disorders ။ 2010;16(7):453–457. [PubMed]
59. Rao H. , Mamikonyan E. , Detre JA ။ , et al ပါကင်ဆန်ရောဂါရှိသည့်စိတ်ကြွဆေးထိန်းချုပ်မှုဆိုင်ရာရောဂါများနှင့်အတူ ventral striatal လုပ်ဆောင်မှုကိုလျော့နည်းစေသည်။ MOV disorders ။ 2010;25(11):1660–1669. [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
60 ။ မာဖီ FC အသင်း။ , Rubinsztein JS ။ , မိုက်ကယ်အေ, ကိုနောက်ကောက်နှင့်စိတ်ကျရောဂါအတွက် et al ဆုံးဖြတ်ချက်-အောင်သိမှတ်ခံစားမှု။ Psychol Med ။ 2001;31(4):679–693. [PubMed]
61 ။ အေ, Szabo Z. , ခန္ဓာကိုယ် N. , Szasz အေ, Janka Z. , Keri အက်စ်ထိခိုက်လွယ်မှုဆုချခြင်းနှင့်ပြစ်ဒဏ်နှင့်အဓိကစိတ်ကျရောဂါအတွက် prefrontal cortex မှရပါမည်။ J ကို disorders အပေါ်ဘယ်လိုသက်ရောက်မှု။ 2006;90(2-3):209–215. [PubMed]
62 ။ Cella အမ်, Dymond အက်စ်, Cooper ကအေချို့တဲ့ခြင်းပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချအဓိကစိတ်ကျရောဂါရောဂါပါ။ J ကို disorders အပေါ်ဘယ်လိုသက်ရောက်မှု။ 2010;124(1-2):207–210. [PubMed]
63 ။ Mueller EM ။ , ငုယင်ဂျေ, Ray WJ ။ , Borkovec TD ။ အနာဂတ်-oriented ဆုံးဖြတ်ချက်ချ Generalized တော့ပူပန် Disorder အတွက်အိုင်အိုဝါလောင်းကစား Task ကို၏ကွဲပြားခြားနားသောဗားရှင်းကိုဖြတ်ပြီးထငျရှားပါသညျ။ J ကိုပြုမူနေ Ther Exp စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2010;41(2):165–171. [PubMed]
64 ။ Maner JK ။ , Richey ဂျေအေ။ , Cromer K. , et al သဘောထားစိုးရိမ်စိတ်များနှင့်စွန့်စားမှု-ကိုရှောင်ကြဉ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချ။ Pers Individ Dif ။ 2007;42(4):665–675.
65 ။ Fecteau အက်စ်, Levasseur-Moreau ဂျေ, Garcia က-Molina အေ, et al အန္တရာယ်စူးရှခြင်းနှင့်ပြင်းထန်သောစိတ်ထိခိုက်ဦးနှောက်ဒဏ်ရာနှင့်အတူဆေးရုံတင်လူနာအတွက်တာ။ PLoS တစ်ခုမှာ။ 2013; 8 (12): e83598 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
66 ။ Güthဒဗလျူ, Schmittberger R. , ရာဇသံကိုညှိနှိုင်း၏ Schwarz ခတစ်ခုစမ်းသပ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ J ကို Econ ပြုမူနေအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ 1982;3(4):367–388.
67 ။ Lejuez CW, ဖတ် JP, Kahler CW, et အန္တရာယ်ဆည်းပူးနေတဲ့အမူအကျင့်အတိုင်းအရှည်၏အယ်လ်အကဲဖြတ်: ။ ။ ။ အဆိုပါလေဘောလုံး Analogue အန္တရာယ် Task ကို (BART) ။ J ကို Exp Psychol Apple က။ 2002;8(2):75–84. [PubMed]
68 ။ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းဖြင့်ရာဇသံကိုကစားအောင် Takahashi တီစီးပွားရေးဇုန်ဆုံးဖြတ်ချက်။ Neuro Endocrinol လက်တ။ 2007;28(5):659–661. [PubMed]
69 ။ Hone-Blanchet အေ, Wensing တီ, Fecteau အက်စ်တဏှာအကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန်အတွက် cue-ထိတွေ့မှုကုထုံးအတွက် virtual reality များအသုံးပြုမှု။ တပ်ဦး Hum neuroscience ။ 2014; 8: 844 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
70 ။ Choi JS, ပန်းခြံအက်စ်, Lee က JY, et al အဆိုပါ psychophysiological တုံ့ပြန်မှုအပေါ်ထပ်ခါတလဲလဲကို virtual နီကိုတင်း cue ထိတွေ့မှုကုထုံး၏အကျိုးသက်ရောက်မှု: ။ ။ ပဏာမလေ့လာမှု။ စိတ်ရောဂါကုသမှု Investg ။ 2011;8(2):155–160. [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
71 ။ Giroux ဗြဲ, Faucher-ကျောက်စရစ်ခဲအေ, စိန့်-Hilaire အေ, Boudreault C. , Jacques C. , အလောင်းအစားလုပ်ဖို့တိုက်တွန်း၏ virtual reality နှင့်ပြုပြင်မွမ်းမံအတွက် Bouchard အက်စ်လောင်းကစားထိတွေ့မှု။ Cyberpsychol ပြုမူနေ Soc Netw ။ 2013;16(3):224–231. [PubMed]
schizophrenic လူနာများ၏ဝိသေသလက္ခဏာများကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်အတွက် 72. Ku J. , Cho W. , Kim JJ, et al ။ သိမှုနှင့်လမ်းညွှန်စွမ်းရည်ကိုအကဲဖြတ်ခြင်း။ Cyberpsychol ပြုမူနေ။ 2003;6(4):397–404. [PubMed]
73 ။ lam CY ။ , ရော်ဘင်ဆင် JD ။ , Versace အက်ဖ်, et al ထိခိုက်စေ reactivity ကိုရှောင်ကြဉ်, relapsers နှင့်ဆက်လက်ဆေးလိပ်သောက်၏တွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပါကဘယ်တော့မှ-quitters ၏ချုပ်ရာဆေးလိပ်ကာလအတွင်း။ Exp Clin Psychopharmacol ။ 2012;20(2):139–150. [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
74 ။ Versace အက်ဖ်, Lam CY, Engelmann JM, et al cue reactivity ကို ကျော်လွန်. : ။ ။ သာယာသောလှုံ့ဆော်မှုဖို့ဦးနှောက်တုံ့ပြန်မှုကျိုးသကဲ့သို့ဖြစ်ကြပါစေရေရှည်ဆေးလိပ်သောက် abstinence ကြိုတင်ခန့်မှန်း။ စှဲလမျးသူ Biol ။ 2012;17(6):991–1000. [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
75 ။ Friedel je ။ , DeHart သည့် WB ။ , က Madden GJ ။ , Odum AL ။ Impulse နှင့်စီးကရက်ဆေးလိပ်: လက်ရှိနှင့် Non-ဆေးလိပ်သောက်သူများအတွက်ငွေကြေးနှင့်စားသုံးသူရလဒ်များ၏လျှော့စျေး။ Psychopharmacology (Berl) ။ 2014;231(23):4517–4526. [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
76 ။ Mueller ET, မြေယာ RD, Kowal ကို BP ဆေးလိပ်သောက်ဆန္ဒပြည့်၏, et al နှောင့်နှေး relapse တစ်ဓာတ်ခွဲခန်းမော်ဒယ်အဖြစ်: ။ ။ ။ ဆေးလိပ်မမက်လုံး၏ဆိုးကျိုးများနှင့်အလုပ်အမှုဆောင် function ကို၏အစီအမံတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုး။ ပြုမူနေ Pharmacol ။ 2009;20(5-6):461–473. [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
77 ။ Sheffer C. , Mackillop ဂျေ, McGeary ဂျေ, et al နှောင့်နှေးလျှော့, ထိန်းချုပ် locus နှင့်သိမြင်မှု Impulse လွတ်လပ်စွာဆေးလိပ်သောက်တဲ့အလွန်အမင်းမှီခို, နိမ့်လူမှုစီးပွားရေးအုပ်စုတွင်ဆေးရွက်ကြီးမှီခိုကုသမှုရလဒ်များကြိုတင်ခန့်မှန်း။ နံနက် J ကိုစွဲလမ်း။ 2012;21(3):221–232. [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
78 ။ Miniussi C. , Harris ကဂျေအေ။ သိမြင်မှုမှ neuroscience အတွက် Ruzzoli အမ်မော်ဒယ်လင်း Non-ထိုးဖောက်ဦးနှောက်ဆွ။ neuroscience Biobehav ဗျာ 2013;37(8):1702–1712. [PubMed]
79 ။ Fecteau အက်စ်, Fregni အက်ဖ်, Boggio PS ။ , Camprodon ဂျေအေ။ အဆိုပါစွဲလမ်းဦးနှောက်ထဲမှာဆုံးဖြတ်ချက်ချ၏, Pascual-Leone အေ Neuromodulation ။ Subst အသုံးပြုမှုလွဲအသုံးပြုခြင်း။ 2010;45(11):1766–1786. [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
80 ။ Knoch ဃ, Gianotti LR ။ , Pascual-Leone အေ, အနိမ့်ကြိမ်နှုန်းထပ်တလဲလဲ transcranial သံလိုက်ဆွနေဖြင့်ညာဘက် prefrontal cortex ၏ et al Disruption အန္တရာယ်-ယူပြီးအပြုအမူဖြစ်ပေါ်သည်။ J ကို neuroscience ။ 2006;26(24):6469–6472. [PubMed]
81 ။ Fecteau အက်စ်, Knoch ဃ, Fregni အက်ဖ်, Sultani N. , Boggio P. , အ prefrontal cortex အတွက်လှုပ်ရှားမှုပြောင်းလဲပစ်အားဖြင့်အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေအမူအကျင့်မယုတ်လျော့စေ Pascual-Leone အေ: တစ်တိုက်ရိုက်လက်ရှိဆွလေ့လာမှု။ J ကို neuroscience ။ 2007;27(46):12500–12505. [PubMed]
82 ။ transcranial တိုက်ရိုက်လက်ရှိဆွခြင်းဖြင့် Fecteau အက်စ်, Pascual-Leone အေ, Zald DH ။ , et prefrontal cortex ၏အယ်လ် Activation စိတ်မကောင်းစရာဝေဝါးဆုံးဖြတ်ချက်ချစဉ်အတွင်းအန္တရာယ်အဘို့အစာစားချင်စိတ်ကိုလျော့ကျစေပါတယ်။ J ကို neuroscience ။ 2007;27(23):6212–6218. [PubMed]
83 ။ Gorini အေ, Lucchiari C. , စယ်-Edu ဒဗလျူ, မကြာသေးမီက abstinent မှီခိုကင်းသည်အသုံးပြုသူများအတွက်အန္တရာယ်များရွေးချယ်မှု၏ Pravettoni G. အ Modulation: တစ် transcranial တိုက်ရိုက်-လက်ရှိဆွလေ့လာမှု။ တပ်ဦး Hum neuroscience ။ 2014; 8: 661 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
84 ။ Hecht ဃ, Walsh V. , Lavidor အမ် Bi-တိုကျရိုကျတိုက်ရိုက်လက်ရှိဆွနှောင့်နှေးလျှော့ရွေးချယ်မှုသာသက်ရောက်သည်။ Cogn neuroscience ။ 2013;4(1):7–11. [PubMed]
85 ။ cho အက်စ်အက်စ်။ , Ko JH ။ , Pelleechia G. အ, ဗန် Eimeren တီ, Cilia R. , Strafella AP ။ ညာဘက် dorsolateral prefrontal cortex ၏စဉ်ဆက်မပြတ် theta ပေါကျကှဲဆွ Impulse အဆင့်ပြောင်းလဲမှုများဖြစ်ပေါ်သည်။ ဦးနှောက်စိတ်ကြွဆေး။ 2010;3(3):170–176. [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
86 d'Alfonso AA ကို။ , ဗန် Honk ဂျေ, Hermans အီး, Postma အေ, de Haan EH ။ အမျိုးသမီးဘာသာရပ်များအတွက် prefrontal cortex မှာထပ်တလဲလဲ transcranial သံလိုက်ဆွပြီးနောက်ခြိမ်းခြောက်မှုမှရွေးချယ်အာရုံစူးစိုက်မှုအတွက် laterality သက်ရောက်မှု။ neuroscience လက်တ။ 2000;280(3):195–198. [PubMed]
87 ။ Mondino အမ်, Thiffault အက်ဖ်, Fecteau အက်စ်ဟာ dorsolateral prefrontal cortex ကျော်လျှောက်ထား noninvasive ဦးနှောက်ဆွ nonspecifically ကျန်းမာတစ်ဦးချင်းစီအတွက်ခံစားချက်နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲနဲ့သြဇာလွှမ်းမိုးသလား တပ်ဦးဆဲလ် neuroscience ။ 2015; 9: 399 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
88 ။ Feeser အမ်, Prehn K. , Kazzer P. , Mungee အေ, Bajbouj အမ် Transcranial တိုက်ရိုက်လက်ရှိဆွစိတ်လှုပ်ရှားမှုစည်းမျဉ်းစဉ်အတွင်းသိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးပိုကောင်းစေပါတယ်။ ဦးနှောက်စိတ်ကြွဆေး။ 2014;7(1):105–112. [PubMed]
89 ။ Levasseur-Moreau ဂျေ, ဆုံးဖြတ်ချက်ချ၏ neuro-မော်ဂျူ၏ Fecteau အက်စ် Translational လျှောက်လွှာ။ ဦးနှောက်စိတ်ကြွဆေး။ 2012;5(2):77–83. [PubMed]
90 ။ Hayashi တီ, Ko JH ။ , Strafella AP ။ စီးကရက်တဏှာ၏ Self-ထိန်းချုပ်မှုကာလအတွင်း Dagher အေ Dorsolateral prefrontal နှင့် orbitofrontal cortex interaction က။ proc Natl Acad သိပ္ပံယူအက်စ်အေ. 2013;110(11):4422–4427. [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
91 ။ နှောင့်နှေးလျှော့, အရောင်ပြန်ဟပ်မှုအကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်စီးကရက်စားသုံးမှု Sheffer အီး။ , Mennemeier အမ်, မြေယာ RD ။ , et al Neuromodulation ။ J ကို Subst AbuseTreat ။ 2013;45(2):206–214. [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
92 ။ ပဏာမလေ့လာမှု: ဆေးရွက်ကြီးဆေးလိပ်သောက်သူများအတွက် transcranial တိုက်ရိုက်လက်ရှိဆွနှင့်အတူဆေးလိပ်သောက်ခြင်းနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချအပြုအမူတွေ၏ Fecteau အက်စ်, Agosta အက်စ်, Hone-Blanchet အေ, et al Modulation ။ မူးယစ်ဆေးအရက်မူတည်တယ်။ 2014; 140: 78-84 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
93 ။ Rosenberg က O. , Klein ld ။ , Dannon PN ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားများ၏ကုသမှုများအတွက်နက်ရှိုင်းသော transcranial သံလိုက်ဆွ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု Res ။ 2013;206(1):111–113. [PubMed]
94 ။ Modirrousta အမ်, နူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်း, BP ။ , Sareen ဂျေ, Enns မဂ္ဂါဝပ်။ obsessive compulsive ရောဂါအတွက်သိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေး၏ချို့ယွင်းရုံးတင်စစ်ဆေး-by-ရုံးတင်စစ်ဆေးညှိနှိုင်းမှုနက်ရှိုင်းသောထပ်တလဲလဲ transcranial သံလိုက်ဆွပြီးနောက်ပိုမိုကောင်းမွန်စေတယ်။ BMC neuroscience ။ 2015; 16: 63 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
95 ။ Strafella AP ။ , pause တီ, Barrett ဂျေ, လူ့ prefrontal cortex ၏ Dagher အေထပ်ခါထပ်ခါ transcranial သံလိုက်ဆွဟာ caudate နျူကလိယအတွက် dopamine လွှတ်ပေးရန်ဖြစ်ပေါ်သည်။ J ကို neuroscience ။ 2001; 21 (15): RC 157 ။ [PubMed]
96 ။ cho အက်စ်အက်စ်။ , Strafella AP ။ လက်ဝဲ dorsolateral prefrontal cortex ၏ rTMS အဆိုပါ ipsilateral anterior cingulate cortex နဲ့ orbitofrontal cortex အတွက် dopamine လွှတ်ပေးရန် modulates ။ PLoS တစ်ခုမှာ။ 2009;4(8): e6725 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
97 ။ အေ, Edden RA-Blanchet Hone ။ လူ့ prefrontal နှင့် striatal metabolites အပေါ်အမှန်တကယ်အချိန်အတွက် transcranial တိုက်ရိုက်လက်ရှိဆွ၏, Fecteau အက်စ်အွန်လိုင်းဆိုးကျိုးများ။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2015 ဒီဇင်ဘာ 1 ။ ရှေ့ဆက်ပုံနှိပ်၏ EPub ။ Doi: 10.1016 / ည။ biopsych.2015.11.008 ။ [PubMed]
98 ။ ။ ။ တစ်ဦးအလားအလာအလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်လေ့လာမှု: Cousijn ဂျေ, Wiers RW, Ridderinkhof KR, ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းနှင့်ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့အတွက် et al တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှုဆေးခြောက်သုံးစွဲခြင်းအတွက်အပြောင်းအလဲများကိုခန့်မှန်း။ စှဲလမျးသူ Biol ။ 2013;18(6):1013–1023. [PubMed]
99 ။ Martinez ဃ, လက်သမား KM ကင်းမှီခိုအတွက်လျူအက်ဖ်, et al Imaging က dopamine ဂီယာ: ။ ကုသမှု neurochemistry နှင့်တုန့်ပြန်အကြား link ကို။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2011;168(6):634–641. [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
100 ။ ဝမ် GJ ။ , စမစ်အယ်လ်, Volkow ND ။ , et al လျော့နည်းသွား dopamine လှုပ်ရှားမှုစိတ်ကြွဆေးချိုးဖောက် relapse ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ Mol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2012;17(9):918–925. [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
101 ။ Samanez-လာကင်ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း။ , မာတာ R. , Radu PT ။ , Ballard IC ။ , Carstensen ll ။ , လူယာသည် SM ။ ကျန်းမာလူကြီးများအတွက် intertemporal ရွေးချယ်မှုစဉ်အတွင်း striatal နှောင့်နှေး sensitivity ကိုအတွက်ခေတ်ကွဲပြားခြားနားမှု။ တပ်ဦး neuroscience ။ 2011; 5: 126 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]